Mahajanga : Polisy voatsindron’antsy -
AccueilSongandinaMahajanga : Polisy voatsindron’antsy
Mahajanga : Polisy voatsindron’antsy
Polisy iray manodidina ny 30 taona no notsatohan’ny jiolahy miisa roa ny antsy rehefa nahatratra azy ireo nanao vola sandoka, tany Antanimasaja Mahajanga. Raha ny fanazavana nentin’ny polisim-pirenena tany an-toerana dia tamin’ny alalan’ny fanomezam-baovao avy amin’ny olona teny amin’ny manodidina no nahafahana nisambotra azy ireo. Voalaza tamin’izany fa misy ireto jiolahy ireto nikasa hanaparitaka vola sandoka teny amin’ny manodidina an’i Tsararano. Tonga teny an-toerana ireo polisy taorian’ny fampandrenesana azy ka sarona teny an-toerana tokoa ireo jiolahy teo am-panaovana ny asa ratsiny niaraka tamin’ny vola sandoka. Nosamborina natao famotorana teny an-toerana ireo roalahy ireo, izay polisy roa ihany koa no tonga nanao ny fisamborana. Nentina teny amin’ny biraon’ny polisin’ny boriborintany fahatelo avy hatrany izy roalahy ireo, izay nahatratrarana vola sandoka, hoy ihany ny loharanom-baovao. Tsy lavitry ny toerana hidirana tao amin’ny kaomisarian’ny polisy dia namaly ireo jiolahy roa ireo. Vao tafidina ny Bajaj nitondrana azy anefa izy ireo dia nikasa handositra niala ireo mpitandro filaminana, ka nanatsatok’antsy ilay polisy iray teo amin’ny kibony. Nentina teny amin’ny hopitaly Androva ity polisy naratra mafy ity, ary efa nahazo fitsaboana amin’izao.
Nandositra avy hatrany ireo roalahy rehefa nahavita ny asa ratsiny, saingy mbola niezaka nanao ny fisamborana kosa ilay polisy iray tamin’io alina io. Voasambotra tsy lavitra teny an-toerana ihany ilay jiolahy tompon’antoka, ary tsy hita popoka kosa ny namany. Efa tsy misy atahorana ny ain’ilay polisy voatsindrona antsy amin’izao fotoana izao. Ity lehilahy nahavanon-doza kosa dia mbola miatrika fanadihadiana ao amin’ny polisy Mangarivotra, Mahajanga. Hatolotra ny fampanoavana avy hatrany kosa ity olon-dratsy ity aorian’ny fanadihadiana azy, izay manana vesatra roa lehibe hanenjehana azy. Etsy andanin’izany ny raharaha fanaovana vola sandoka sy ny fandratrana mpitandro filaminana amperin’asa. Efa tena mahasahy mihitsy ireo jiolahy fa tena mahavita manohitra polisy ireo jiolahy efa eo an-tokontanin’ny kaomisaria. Raha ny tombatombana mantsy dia tokony efa vitan’ny polisy ny fisavana mialohan’ny hitondrana azy any amin’ny birao.